ဘရာဇီးကသမ္မတ Bolsonaro ကျောင်းများတွင်ကျားအတွေ | Apg29
ဘရာဇီးကသမ္မတ Bolsonaro ကျောင်းများတွင်ကျားအတွေ
ဒါဟာခရစ်ယာန်များသည်အကြားအလွန်ရေပန်းစား, အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့တူအဘယ်ကြောင့်ဘရာဇီးသမ္မတယာဣ Bolsonaro, နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။
School တွင်ကလေးများကျားသဘောတရားမှကာကွယ်ရပါမည်, ဘရာဇီး၏သမ္မတ, ယာဣ Bolsonaro, တွစ်တာမှာရှာဖွေနေကဆိုသည်။ သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒီကိစ္စကိုအပေါ်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
"ကျောင်းကကလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်, ကျွန်မမူလတန်းကျောင်းများတွင်ကျားမသဘောတရားတားမြစ်ဖို့ဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်ထားရန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းကြပါပြီ" ဟုသူကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရင်းမြစ်: တွစ်တာ ။
အဆိုပါအပြောင်းအရွေ့သူဘရာဇီးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါ Bolsonaro ခဲ့ပုံနှင့်အညီဖြစ်ပါသည် ..
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့နိုင်ငံမှာပြန်လည်တည်ဆောက် ... ကျနော်တို့တဦးတည်းလူ ဖြစ်. , ကျား, မသဘောတရားတိုက်ဖျက်ရေး, မိသားစု, ဘာသာတရားရိုသေလေးစားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုဒလူ-ခရစ်ယာန်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကယ်တင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရှေ့ကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်," ဟုသူက The Guardian သတင်းစာအရသိရသည်ဟုဆိုသည်။
ဒါဟာအလွန်, အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့တူအဘယ်ကြောင့်ဘရာဇီးသမ္မတယာဣ Bolsonaro, နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ် လူကြိုက်များ ခရစ်ယာန်တွေဟာအကြား။ နှင့်၎င်း၏အမေရိကန်သမ္မတတို့လိုပဲသူဟာလိင်တူချစ်သူစက်ဝိုင်းနှင့်လက်ဝဲ-လစ်ဘရယ်အကြားအလွန်ရေပန်းစားမဟုတ်ပါဘူး။
တနင်္ဂနွေကျောင်းအမြိုးသားအများအတွက်အကောင်းဆုံးကျောင်းကပါ! ထို့နောက်သူတို့ဘဝကတဆင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည် - ယေရှုကရ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ - သူတို့သညျယရှေုကိုကိုင်ရနိုင်အောင်သူတို့ကိုတနင်္ဂနွေကျောင်းသွားကြကုန်အံ့။